Klout ရမှတ်များအသစ်တီထွင်ခဲ့သည် ... ငါကကြိုက်တယ်! | Martech Zone
ငါကြားဖူးတယ် Klout Las Vegas ရှိ Klout အသင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်အထိဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ ငါကစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ရမှတ်အချို့ချို့တဲ့ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်များစွာသောစာမျက်နှာများ၊ အကောင့်မြောက်မြားစွာနှင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာသောအွန်လိုင်းပေါ်ရှိသမိုင်းများရှိခဲ့သော်လည်းကလော့တ်သည်ထိုအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။
Klout ကရမှတ်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်သည့်အခါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရမှတ်သည်မကြာသေးမီကလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည် ... ယခင်ကထက် ပို၍ ပင်။ ကျွန်တော့်ရမှတ်ရဲ့အောက်ဘက်လိမ်မာကျောမှုကကျွန်တော့်ကိုလူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းဘာမှမသင်ပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ငါကြည့်တော့ဘူး။
Klout အဓိကရမှတ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပဲပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ၊ သူတို့ကစလိုက်ကတည်းကငါကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သြဇာသက်ရောက်သူများကိုရှာဖွေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး Klout မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသည် (နည်းနည်းစွဲလမ်းစေသည်။ ရအောင်) ။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသင်၏အမှတ်ကိုအက်ပ်ကိုယ်နှိုက်ရှိသတိပေးနံပါတ်အဖြစ်ပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ရမှတ်များကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပင်ဖွင့်စရာမလိုပါ!
ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်နောက်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ တက်ကြွသောစာမျက်နှာသည်အမှန်တကယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သြဇာသက်ရောက်သူနှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်၊ မည်သည့်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တူညီသည်ကိုတွေ့နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်ပြသမှုကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤသည်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်၊ ထိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဘယ်နေရာနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်သင့်လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။
ငါ Klout သူတို့၏ Klout စတိုင်များသူတို့၏ဇယားကွက်အတွက်အချို့သောအကြံပေးချက်များပေးကြည့်ဖို့နှစ်သက်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူမှုကွန်ယက်များကိုအသုံးချရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်မှုတွင်ပိုမိုမျှတမှုရှိရန်ကူညီရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုတွေ့မြင်ချင်ပါသည်။ ငါသည်ငါ့ Klout ရမှတ် hack ချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့အပြုအမူတွေကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့် Klout ကအလုပ်လုပ်ရဲ့ဖြစ်စေမငါ့ကိုပြောပြစေခြင်းငှါနိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ဤတွင်ရမှတ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် Klout ၏ဗီဒီယိုနှင့်မကြာမီစတင်တော့မည့် Klout Moments ၏အကြိုမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ Klout ရမှတ် 400 ကျော်အချက်ပြမှုများကိုထည့်သွင်း မတူညီသောကွန်ယက် ၇ ခုမှနေ့စဉ်ရမှတ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
ဖော်ပြချက်များ - ပို့စ်တွင်သင့်နာမည်ကိုဖော်ပြခြင်းသည်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုဖော်ပြသည်။
စာရင်းသွင်းသူ: စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမို၍ လွှမ်းမိုးသောလွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းများ: Friend count သည်သင်၏ network ရောက်ရှိမှုကိုတိုင်းတာသည်။ သို့သော်သင်၏ content သည်သင်၏ network နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
Retweets: Retweets များသည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုနောက်လိုက်ကွန်ယက်များသို့ပြသခြင်းအားဖြင့်သင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ဖော်ပြချက်များ - မင်းကိုပြောခြင်းအားဖြင့်သင်၏အာရုံကိုရှာဖွေနေသောလူများသည်အားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ via” နှင့်“ cc” အပါအ ၀ င်ဖော်ပြမှုအမျိုးအစားများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
အသင်းဝင်စာရင်း - အခြားအသုံးပြုသူများမှပြုစုထားသောစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်သင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောနေရာများကိုပြသသည်။
+ ၁ ရက် သင်ဖန်တီးသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြသသည့်အရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု။
စစ်ဆေးသည် Google+ တွင်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုတိုးချဲ့ထားသောကွန်ယက်များသို့ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်သင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးလာသည်။
ခေါင်းစဥ်: LinkedIn မှာမင်းရဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်ဟာခင်ဗျားရဲ့တကယ့်ကမ္ဘာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။
အကြံပြုသူများ - သင်၏ကွန်ယက်ရှိထောက်ခံသူများသည်သင်၏ရမှတ်သို့ LinkedIn မှထည့်ဝင်သည့်အရာအတွက်နောက်ထပ်အချက်ပြမှုများထပ်ထည့်သည်။
+ K ရရှိသည် - လက်ခံခြင်း + K သည်သင်၏ Klout ရမှတ်ကိုရမှတ်၏သမာဓိကိုကာကွယ်ရန်ရက်ပေါင်း ၉၀ တိုင်းတာမှုသံသရာတွင်ကန့်သတ်ထားသောပမာဏဖြင့်တိုးစေသည်။
စာမျက်နှာ၏အရေးပါမှု - Wikipedia Page graph ကိုဆန့်ကျင်။ PageRank algorithm ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တိုင်းတာသည်။
Outlinks အချိုးအား Inlinks: စာမျက်နှာတစ်ခု၏အဝင် link များကိုစာမျက်နှာတစ်ခုနှင့် outbound link အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Inlinks အရေအတွက် - စာမျက်နှာတစ်ခုသို့အဝင် link များစုစုပေါင်းကိုတိုင်းတာသည်။
Kudos to Klout သူ့ဟာသူပြန်လည်တီထွင်ခြင်းအတွက်…သူတို့ဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရဲ့အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ ကလောအွန်လိုင်းတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တိုင်းတာရန်ရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။
Tags: ဘယ်လို klout တိုင်းတာသည်kloutklout ရမှတ်klout ရမှတ်ကဘာလဲ